Germany’s much-anticipated national elections will be held on September 24. Yesterday, Myanmar’s Union Election Commission (UEC) beganavisit to Germany to learn first-hand how this election of 60 million voters is organized, to observe the campaign, as well as the voting and counting on Election Day. The trip is supported by the European Union through the STEP Democracy programme in Myanmar (www.stepdemocracy.eu), implemented by International IDEA and partners.
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဂျာမနီနိ်ုင်ငံသို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
အများစောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြသည့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ရွေးကောက်ပွဲသည် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူပေါင်းသန်း ၆ဝ ပါဝင်သည့်အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲအား မည်သို့စီစဉ်ကျင်းပသည်ကိုအနီးကပ်သင်ယူနိုင်ရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင်မဲပေးခြင်း၊ မဲရေတွက်ခြင်းစသည်တို့အား လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံသို့လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤခရီးစဉ်အတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ၏အထောက်အပံ့ဖြင့် International IDEA နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ရှေ့သို့မြန်မာ (STEP Democracy) အစီအစဉ်မှ စီစဉ်ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။
Myanmar prepares an even more capable electoral administration
In preparation for the 2017 April by-elections, the leadership of the Union Election Commission (UEC) requested International IDEA’s expertise to design, develop the content, organize operations and implement large-scale refresher training operations. This collaboration helped to prepare the UEC’s sub-commissions personnel, at all decentralized levels (states and regions, districts, township, wards and village-tracts) where the by-elections were held.
“Forasustainable, democratic system, the participation of people is very important”, was one of the key takeaways of participants from Magway Region who attendedaTraining of Trainers (TOT) for Community Civic Educators conducted by Scholar Institute.
DIPD Supports Parties ForaSuccessful By-Election
On 1 April, Myanmar held its first elections under the new National League for Democracy (NLD) government. These by-elections, targeting 19 seats in the national and state/regional assemblies, showcased another well-administered election that returnedawide range of political parties to represent their constituencies.
CSOs Getting Ready for Electoral Reforms
Very shortly after by-elections, held in April 2017, CSOs are gearing up foradiscussion of Myanmar´s elections framework “Although we acknowledge some positive steps taken by the Union Election Commission, we confirmed many of the findings we made in November 2015 and see an urgent need forabroad discussion of electoral reforms” said Chan Nyein Aung, President and CEO of Charity-Oriented Myanmar (COM), who implementedajoint election observation mission deployed together with Peace & Justice Myanmar (PJM) and Hornbill Organization (HBO).
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်းကျင်းပခဲ့သည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်များမကြာမီတွင် အရပ်ဖက်လူမှု့အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ရွေးကောက်ပွဲများဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့်ပက်သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအတွက် အသင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ “ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုသော်လည်း ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်ဖို့အလျင်အမြန်လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်” ဟု Peace & Justice Myanmar (PJM) နှင့် Hornbill Organization (HBO) တို့နှင့်အတူတကွ ပူးတွဲရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် Charity-Oriented Myanmar (COM) ၏ ဥက္ကဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးငြိမ်းချမ်းအောင်ကဆိုသည်။
“ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ဖို့ရာ လူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်” ဟု Scholar Institute မှဆောင်ရွက်သော လူထုပညာပေးရေးနည်းပြသင်တန်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှသင်တန်းသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အောင်မြင်သည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရန် နိုင်ငံရေးပါတီများအား DIPD မှပံ့ပိုးကူညီ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသစ်လက်ထက် ပထမဆုံးအကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲအား ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား အမျိုးသားအဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် လစ်လပ်နေရာ ၁၉ ခုအတွက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကာ နိုင်ငံရေးပါတီများစွာကို မိမိတို့၏မဲဆန္ဒနယ်အားကိုယ်စားပြုစေနိုင်ခဲ့ပြီး ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဦးဆောင်သူများက International IDEA မှ ကျွမ်းကျင်သူများအား ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကြောင်းအရာများဖန်တီးရေးသားခြင်း၊ လုပ်ငန်းများစီစဉ်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာဒေသများရှိ (ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာစသည့်) အဆင့်အားလုံးရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကော်မရှင်ခွဲများမှဝန်ထမ်းများအား ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။